Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato baraf qalalan | Saadaasha Shabakadda
Xaqiiqdii waligaa ma maqashay baraf qalalan. Waa kaarboon laba ogsaydh xaalad adag, qaboojiyay cadaadiska hawo-qabadka heerkulka -78,5 ° C. Sifada ka dhigaysa mid gaar ah ayaa ah in markay "dhalaasho" ay si toos ah ugu kacdo xaalad gaas ah iyada oo aan looga tagayn nooc qoyaan ah. Sidaa awgeed waxaa loo yaqaan baraf qallalan.
Ma rabtaa inaad ogaato astaamaheeda iyo isticmaalkeeda kala duwan?
1 Astaamaha iyo guryaha
2 Faa'iidooyinka barafka qalalan ee biyaha
3 Saamayn gaar ah
4 Maxaa loogu talagalay
5 Sida loo sameeyo baraf qalalan guriga
Astaamaha iyo guryaha
Baraf qalalan waxaa laga helaa gaaska loo soo saaray wax soo saar ahaan geedi socodka warshadaha kale. Baraf qallalan ayaa lagu soo saaraa dhirta gubashada iyo falcelinta halsano. Sidii hore loo sheegay, waxay ku saabsan tahay qaboojiyaha kaarboon laba ogsaydhka. Gaaskan heer kulka aad u hooseeya wuxuu awood u leeyahay inuu ku sugnaado xaalad adag. Marka sublimated ma soo saaro nooc kasta oo dareere ah, biyo ama qoyaan ah.
Marka gaaskani hoos u dhigo jawiga ay ku raran yihiin CO2, waxay u egtahay inuu yareeyo qadarka qoyaanka ee deegaanka. Tani waxay gaaskan ka dhigeysaa mid aad waxtar u leh in la isticmaalo marka la isku dayayo in la ilaaliyo waxyaabaha xasaasiga u ah qoyaanka.
Kiilo kasta oo baraf qalalan ah waxay soo saartaa 136 qaboojiye oo tamar ah. Gaasku wuxuu ku jiraa heer-kul ah -78,5 ° C wuxuuna soo saaraa 16 qaboojiye oo dheeri ah, taas oo ka dhigaysa suurtogal in la helo wadar ahaan 152 qaboojiye kiilo kasta oo baraf qalalan ah.
Faa'iidooyinka barafka qalalan ee biyaha
Miisaanka la midka ah, barafka qalalan wuxuu awood u leeyahay qaboojinta 170% in kabadan barafka caadiga ah. Tani waa mid aad u xiiso badan aagga jikada, maadaama ay awood u leedahay inay si dhakhso leh u qaboojiso alaabada. Maaddaama cufnaanta barafka qalalan ay ka badan tahay 1,5 Kg / dm3 cufnaanta barafka biyuhuna uu u dhigmo 0,95 Kg / dm3, waxaa soo baxday in a mug isku mid ah oo baraf ah loo isticmaalo, barafka qalalan wuxuu leeyahay awood qaboojin oo u dhiganta 270% marka loo eego barafka dhaqameed. Tani waxay saameyn xoog leh ku leedahay meelahaas oo mugga uu barafku ku fadhiyaa aasaas u yahay, barafka qalalan ayaa ah doorashada ugu fiican ee looga faa'iideysan karo booskan.
Saamayn gaar ah
Barafka qallalan ma laha oo keliya sifooyin gaar ah sida kuwa aan kor ku soo sheegnay, laakiin sidoo kale waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay wakiilka bakteeriyada iyo fungistatic. Markay dhacdo sublimation, jawi ayaa la soo saaraa kaas oo isku-uruurinta CO2 ay aad u sarreyso oo ficil antimicrobial ah la sameeyo. Sidaa darteed, waa gaas aad u fiican si loo yareeyo koritaanka bakteeriyada, caaryada iyo khamiirka iyo in la abuuro jawi fayadhowr gebi ahaanba ah.
Gaaskaani wuxuu awood u leeyahay inuu barakiciyo oksijiinta ku jirta jawiga, konteenaarada dhexdeeda iyo konteynarrada, taasoo gacan ka geysaneysa hagaajinta tayada bayoolaji ee meelaha ay alaabada qaarkood ugu baahan tahay in lagu keydiyo oo lagu keydiyo.
Baraf qallalan ayaa loo isticmaalaa daaweyn iyo ficillo kala duwan maanta. Isticmaalkiisa waxaa ka mid ah:
Cilmi-baarista caafimaadka iyo sayniska: Si loo ilaaliyo xubnaha loo beero ama loo barto, waxaa aad loogu talinayaa in la isticmaalo baraf qalalan, maxaa yeelay awooddiisa qaboojiye ee weyn waxay ku haysaa xaalad wanaagsan. Waxaa sidoo kale loo adeegsadaa cilmi baarista sayniska si loogu ilaaliyo alaabada bayoolojiga heerkulka hooseeya, falcelinta qaboojinta qabow iyo unugyada qabow ee degdegga ah, unugyada, bakteeriyada iyo fayrasyada
Dib u soo celinta: Cunnooyinka xunxun, barafka qalalan waxaa loo isticmaalaa in lagu furo adduunyo suurtagal ah si loo abuuro suxuun gebi ahaanba qalaad oo tayo sare leh iyo qiimo. Thanks to sifooyinka barafkan, natiijooyin aad u xiiso badan oo soo jiidasho leh ayaa loo gaari karaa macmiilka. Cunnooyinka ugu casrisan ayaa ka sharxi kara soo bandhigyada asalka ah ilaa ceeryaamada udgoon, faleebada qabow, qaabab ka soo horjeedka muusiga iyo fois gras, slushies, kareemada barafka, xumbo iyo kareemada, ama waxay abuuri karaan saameyn la yaab leh oo qiiq leh isku darka iyo is biirsaday is biirsaday.
Warshadaha: In industry ee element this waxaa loo isticmaalaa si loo fududeeyo kulanka iyo hagaajinta ee gogo 'by foosha qabow. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa burburka cryogenic iyo wasakhda balaastikada iyo qashinka.
Agri-cuntada: Qeybtan waxaa loo isticmaalaa in lagu qaboojiyo cajiinka cajiinka inta lagu jiro qodista iyo isku darka hilibka, qaboojinta qoto dheer ee cuntada iyo nidaaminta heerkulka. Isticmaalka barafka qalalan ee gaadiidka waxay xaqiijineysaa dayactirka silsiladda qabow.
Qaybinta ballaaran: Waxaa loo isticmaalaa markii dayactir deg-deg ah loo baahdo haddii ay dhacdo in qalabka qaboojiyaha qaar ka go'o iyo in la ilaaliyo silsiladda qabow.
Nadiifinta Cryogenic: Qaybaha barafka qalalan waxaa lagu duri karaa cadaadis sare si loo nadiifiyo dhammaan meelaha dusha sare ee ay soo mareen nooc ka mid ah wax ka beddelka biyaha, sida qalabka korontada qaarkood.
Beeraha: Waxaa loo adeegsadaa natiijooyin wanaagsan oo lagu xakameeyo cayayaanka sida jiirka, jiirarka iyo cayayaanka.
Kumbuyuutaro iyo koronto Waa ikhtiyaar aad u wanaagsan qaboojinta qalabka elektarooniga ah iyo hagaajinta waxqabadkooda, dardargelinta gudbinta calaamadaha korantada.
Dhismaha: Waxaa loo isticmaalaa in lagu qaboojiyo dabaqyada iyo dhuumaha si loo abuuro fiilo ka hor dayactirka.
Sida loo sameeyo baraf qalalan guriga
Haddii aad rabto inaad ku aragto saameynta gaarka ah ee barafka qalalan guriga, waa inaad haysataa qalabka soo socda:
CO2 - Kaarboon laba ogsaydh (waxaan ka heli karnaa dab bakhtiiye)
Bac ama maro
Adabooraha loogu talagalay in lagu buuxiyo giraangiraha baaskiilka
Waa inaad dhigtaa boorsada dharka (waa muhiim inay leedahay daloolo si ay u oggolaanayso in yar oo gaas ahi ka baxsado) oo ku xeeran sanka dab-bakhtiiye ama silsiladda CO2 ee aan isticmaaleyno. Marka aan dhigno bacda dharka, gaaska waan sii deyneynaa si ay bacda u gasho. Marka gaaska la sii daayo, cadaadiska ku jira gudihiisa ayaa u horseedi doona inuu si otomaatig ah u barafoobo oo aan yeelanno baraf qalalan. Barafkan qalalan waxaa loo adeegsan karaa inuu saameyn weyn ku yeesho macmacaankeenna iyo cabitaankeenna, tan iyo markii uu xiriir la yeesho biyaha wuu hoos u dhigayaa oo wuxuu u soo baxayaa uumiga cad ee cajiibka ah.
Sidaad u aragto, barafka qallalan waxaa si weyn looga isticmaalaa qaybo badan saameynteeduna weligood ma joojiyaan inay naga yaabaan. Hadda oo aad ogtahay astaamihiisa, ku dhiirran inaad ku isticmaasho guriga oo aad ka yaabiso saaxiibbadaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Baraf qallalan
Marka lagu diyaarinayo barafka qalalan guriga, waxay xusayaan adabtarad si loo kiciyo giraangiraha baaskiillada.
Jawaab Jorge Rivera